FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SHIH-POO - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Shih-Poo
Alika mifangaro mifangaro Shih Tzu / Poodle
Oliver the Shih-Poo amin'ny faha-7 taonany
Ny Shih-Poo dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Shih Tzu ary ny Poodle . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Peggy the Shih-Poo amin'ny 1 taona sy 9 volana talohan'izay sy taorian'ny nanapahana ny volony— 'I Peggy io. Shih-Poo izy. Ny reniny dia Shih Tzu ary ny rainy dia Toy Poodle. Tena mazoto sy be fitiavana izy. Izy io talohan'ny sy taorian'ny fikarakarany. '
alika eskimo amerikana efa lehibe
Peggy the Shih-Poo amin'ny maha alika azy amin'ny 8 volana
Roman the Shih-Poo amin'ny maha alika azy amin'ny 5 volana eo ho eo— 'Roman dia alika kely Shihpoo mahery. Tiany ny milalao ny kilalao sy ny fandokafany. Izy dia mifangaro eo anelanelan'ny Toy Poodle sy Shih Tzu. Mety ho mafy loha izy indraindray, nefa mihaino ny ankamaroany. Izy no zanako teddy kely! '
Chanel the Shih-Poo sahabo ho roa taona— 'Chanel dia alika manan-tsaina sy be fitiavana. Ny dadan'i Chanel dia Poodle ary ny reniny dia Shih Tzu. Nandova ny fahendrena tamin-drainy i Chanel sy ireo fototarazo mamy sy ankafizin'ny reniny. Ny palitaony dia toy ny landy, mamirapiratra sy malefaka tokoa, heveriko fa ny firafitra sy ny fahalemeny dia avy amin'ny fototarazon'ny rainy hatramin'ny nahitako shih-Tzus purebred marobe ary ny volon'ny volon'izy ireo dia landy nefa matevina kokoa. '
'Ity no Chase. Efa ho 1 ½ taona izy tamin'ity sary ity, ary mifangaro eo anelanelan'i Poodle sy Shih Tzu. Tena haingo izy, ary namely an'i Storm rahalahiny (zaza 2½ taona Weimaraner ) tsy tapaka. Sariaka be izy, ary mieritreritra fa lehibe toa an'i Storm (rahalahiny) izy. '
'Dezi (ankavia) sy Jude (ankavanana) dia Shih-Poos. Herintaona i Dezi, ary mitady fikajiana izy ary ratsy toetra. Angovo mahery sy fiaraha-monina, fa nitazona fahazaran-dratsy ratsy avy amin'ny alika Joda hafa. Tian'i Joda ny fifantohana ary afaka ny ho tonga saro-piaro an'ny Dezi. Izy dia mpandeha saro-kenatra ary angovo mahery koa. Tia mampifaly ny tompony, ary manana sendra alika kely . Ny alikako roa dia tiako indrindra ary biby fiompy ao an-trano tsara. '
Rufus the Shih-Poo alika amin'ny 8 herinandro
Voahazo ny alik'i Shih-Poo amin'ny 3 ½ volana
Maggie ilay mainty sy fotsy Shih-Poo amin'ny maha-alika kely 4 volana azy
Maggie ilay mainty sy fotsy Shih-Poo dia nihalehibe tamin'ny faha-3 taonany— 'Maggie dia alika tena salama. Tsy milatsaka izy fa mila karakaraina isaky ny 6 ka hatramin'ny 8 herinandro. Ny lanjany dia 16 lbs. Maggie dia tena marani-tsaina. Nofanina tamin'ny vilany izy tao anatin'ny roa herinandro. Amin'ny tongotra dia tsy mila famatorana. Miaraka amin'ny alika hafa izy, na dia mety ho saro-kenatra aza i Maggie amin'ireo olona tsy fantany. Mpiambina tsara izy. Tsy misy olona afaka miditra ao an-trano raha tsy fantany momba izany. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Shih-Poo
Sarin'i Shih-Poo 1
pitbull orona manga mpampijaly amerikana
inona no afangaro ny mpanao ady totohondry pitbull mitovy
sisin-Pyrénées lehibe collie Mix alika kely
pitbull afangaro amin'ny husky